2 Samuel 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
13 Ná Dawid ba Absalom+ wɔ nuabea hoɔfɛfo bi a wɔfrɛ no Tamar.+ Nsɛm yi akyi no, ɛbae sɛ na Dawid ba Amnon+ pɛ+ no. 2 Na ɛhyɛɛ Amnon so ara ma ne nuabea Tamar nti ɔyaree,+ efisɛ na ɔyɛ ɔbaabun, na ɛyɛ den wɔ Amnon ani so+ sɛ obetumi ayɛ no biribi.+ 3 Ná Amnon wɔ adamfo bi a ne din de Yehonadab+ a ɔyɛ Dawid nua Simea+ ba; ná Yehonadab yɛ onitefo. 4 Enti obisaa no sɛ: “Dɛn nti na ɔhene ba paa, anɔpa biara na woabotow yi? Worenka nkyerɛ me?”+ Ɛnna Amnon ka kyerɛɛ no sɛ: “Mepɛ+ me nua Absalom nuabea Tamar.”+ 5 Ɛnna Yehonadab kae sɛ: “Kɔda wo mpa so na patuw yare,+ na wo papa bɛba abɛhwɛ wo. Sɛ ɔba a, ka kyerɛ no sɛ, ‘Mesrɛ wo, ma me nuabea Tamar mmra, na me yare no nti ɔmmɛma me aduan. Ɔmmɛyɛ awerɛkyekye aduan no m’anim, na minhu na minni wɔ ne nsam.’”+ 6 Ɛnna Amnon kɔdaa hɔ na ɔpatuw yaree,+ na ɔhene bɛhwɛɛ no. Afei Amnon ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Mesrɛ wo, ma me nuabea Tamar mmra mmɛyɛ paanoo nkuruwankuruwa abien wɔ m’anim na me yare no nti, minni wɔ ne nsam.” 7 Ɛnna Dawid soma kɔɔ Tamar hɔ wɔ fie sɛ: “Mesrɛ wo, kɔ wo nua Amnon fie na kɔyɛ awerɛkyekye paanoo ma no.” 8 Enti Tamar kɔɔ ne nua Amnon+ fie kɔtoe sɛ ɔda hɔ. Na ɔfaa esiam a wɔafɔtɔw, na ɔbɔe de yɛɛ paanoo nkuruwankuruwa wɔ n’anim. 9 Owiei no, ɔfaa kankyee no na oyiyii wɔ n’anim, nanso Amnon anni, na ɔkae sɛ: “Momma obiara mfi me nkyɛn mfi adi!”+ Na obiara fii ne nkyɛn fii adi. 10 Afei Amnon ka kyerɛɛ Tamar sɛ: “Fa awerɛkyekye paanoo no bra pia mu na me yare no nti minni wɔ wo nsam.” Enti Tamar de paanoo nkuruwankuruwa a wayɛ no kɔmaa ne nua Amnon wɔ pia mu. 11 Bere a ɔkɔɔ ne nkyɛn sɛ ɔrekɔma no aduan no, ɛhɔ ara na ɔyeree+ no, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Me nuabea,+ bra na me ne wo nna.”+ 12 Na ɔno nso ka kyerɛɛ no sɛ: “Dabi me nua! Mmrɛ me ase;+ wɔnyɛ saa wɔ Israel.+ Nyɛ aniwude saa.+ 13 Na me, ɛhe na anka mede m’ahohora bɛfa? Na wo nso wobɛyɛ sɛ Israel mmarima a wonni adwene no bi. Enti mesrɛ wo, wo ne ɔhene nkasa, na ɔremfa me nkame wo.” 14 Nanso wantie no, na ɔde ahoɔden bunkam no so brɛɛ no ase,+ na ɔne no dae.+ 15 Ɛno akyi no, Amnon de ɔtan kɛse tan no, na ɔtan a ɔtan no no yɛɛ kɛse sen ɔdɔ a ɔdɔɔ no no. Enti Amnon ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɔre, fi ha kɔ!” 16 Ɛnna ne nuabea no ka kyerɛɛ no sɛ: “Dabi me nua; pam a worepam me yi yɛ bɔne sen nea wode ayɛ me no!” Nanso wantie no. 17 Ɛnna ɔfrɛɛ n’akoa a ɔsom no no ka kyerɛɛ no sɛ: “Mesrɛ wo, pam onipa yi fi me so ma omfi adi, na to ɔpon no mu wɔ n’akyi.” 18 (Saa bere no, na ɔhyɛ atade nsensanmu+ bi; saa nguguso no na na ɔhene mmabea, mmaabun no, hyɛ.) Enti ne somfo no de no fii adi, na ɔtoo ɔpon no mu wɔ n’akyi. 19 Ɛnna Tamar de nsõ+ guu n’atifi, na osuan atade nsensanmu a ɛhyɛ no no mu; afei ɔde ne nsa guu ne ti so+ na ɔde sũ siim kɔe. 20 Na ne nua Absalom+ ka kyerɛɛ no sɛ: “Wo nua Amnon+ na wayɛ wo saa yi? Me nuabea, wo de, yɛ komm. Ɔyɛ wo nua.+ Mfa wo koma nkɔ asɛm no so.” Na Tamar tenaa ne nua Absalom fie, na wamma nnipa mu. 21 Ɔhene Dawid tee nsɛm yi nyinaa,+ na ne bo fuwii pii.+ 22 Na Absalom anka asɛmmɔne anaa asɛmpa bi ankyerɛ Amnon, na Absalom tan+ Amnon sɛ wabrɛ ne nuabea Tamar ase nti. 23 Mfe abien akyi no, Absalom maa nkurɔfo kotwitwaa ne nguan ho+ wɔ Baal-Hasor a ɛbɛn Efraim,+ na Absalom too nsa frɛɛ ahenemma no nyinaa.+ 24 Afei Absalom kɔɔ ɔhene anim, na ɔkae sɛ: “Hwɛ, w’akoa ama nkurɔfo retwitwa ne nguan ho! Enti mesrɛ wo, ma ɔhene ne ne nkoa mmɛka w’akoa ho nkɔ.” 25 Nanso ɔhene ka kyerɛɛ Absalom sɛ: “Dabi, me ba! Mesrɛ wo, mma yɛn nyinaa nnkɔ na yɛanyɛ adesoa amma wo.” Ɔsrɛɛ no ara,+ nanso wampene ne no ankɔ. Hyira na ohyiraa+ no. 26 Ɛnna Absalom kae sɛ: “Sɛ wuntumi nkɔ a, mesrɛ wo, ma me nua Amnon ne yɛn nkɔ.”+ Na ɔhene bisaa no sɛ: “Dɛn nti na wopɛ sɛ ɔne wo kɔ?” 27 Na Absalom srɛɛ+ no, enti ɔmaa Amnon ne ɔhene mmabarima no nyinaa ne no kɔe. 28 Afei Absalom hyɛɛ n’asomfo no sɛ: “Sɛ muhu sɛ Amnon anom nsã ama n’ani agye ne komam+ na meka kyerɛ mo sɛ, ‘Munkum Amnon!’ a, saa bere no na munkum no, munnsuro.+ Ɛnyɛ me na mahyɛ mo saa anaa? Monyɛ den na munnya akokoduru.” 29 Na Absalom nkoa no yɛɛ Amnon sɛnea Absalom hyɛɛ wɔn no,+ na ɔhene mmabarima a wɔaka no nyinaa sɔresɔree, na obiara tenaa n’afurumpɔnkɔ so guanee. 30 Ɛbae sɛ bere a wɔnam kwan so rekɔ no, nkurɔfo kɔbɔɔ Dawid amanneɛ sɛ: “Absalom akunkum ɔhene mmabarima no nyinaa na wɔn mu biako mpo anka.” 31 Ɛnna ɔhene sɔree, na osuan n’atade mu+ de ne ho too fam;+ ná ne nkoa nyinaa nso gyinagyina hɔ a wɔasunsuan wɔn ntade mu.+ 32 Nanso Dawid nua Simea+ ba Yehonadab+ kae sɛ: “Mma me wura nnnwen sɛ ɔhene mma mmerante no nyinaa na wɔakunkum wɔn. Amnon nkutoo na wawu,+ efisɛ Absalom na ɔhyɛe sɛ wonkum no, na ɔbɔɔ pɔw+ yi fi da a ɔbrɛɛ ne nuabea+ Tamar ase+ no. 33 Enti mma me wura ɔhene mmfa ne koma nnkɔ asɛm yi so sɛ, ‘Ɔhene mmabarima no nyinaa awuwu,’ na Amnon nkutoo na wawu.” 34 Absalom de, na waguan.+ Akyiri yi, aberante a ɔrewɛn+ no maa n’ani so hwɛe, na ɔnkɔhwɛ a, nnipa bebree na wofi bepɔw so kwan a ɛda n’akyi no so reba yi. 35 Ɛnna Yehonadab+ ka kyerɛɛ ɔhene sɛ: “Hwɛ, ahenemma no reba. Sɛnea w’akoa kae no, saa ara na ɛte.”+ 36 Na ɛbae sɛ ɔkasa wiei no, ahenemma no bedui, na wɔmomaa wɔn nne so sui; ɔhene ne ne nkoa nyinaa nso suu osu kɛse. 37 Absalom de, na waguan sɛ ɔrekɔ Gesur+ hene Amihud ba Talmai+ nkyɛn. Na Dawid suu+ ne ba no nna no nyinaa. 38 Absalom guan kɔɔ Gesur,+ na ɔtenaa hɔ mfe abiɛsa. 39 Na Dawid kra ani gyinae sɛ obehu Absalom, efisɛ na wakyekye ne werɛ Amnon wu no ho.